Ukukhetha Umhleli Wombhalo wePython Programming - NgePython
Ubunzululwazi bekhompyutha Python Programming
Ukukhetha Umhleli Wombhalo wePython Programming
Yintoni Umhleli Wombhalo?
Ukucwangcisa iPython, uninzi nawuphi na umhleli wombhalo oya kwenza. Umhleli wombhalo yinkqubo egcina iifayile zakho ngaphandle kokufometha. Abaprofeti beLizwi ezifana ne-MS-Word okanye i-OpenOffice.org Umbhali baquka ukufomatha ulwazi xa besindisa ifayile - yile ndlela inkqubo iyazi ngayo isicatshulwa esithile esilungileyo kwaye italicize abanye. Ngokufanayo, abahlaziyi be HTML abaqingqiweyo abagcini ukugcina umbhalo obhaliweyo njengombhalo onesibindi kodwa njengombhalo onesicatshulwa esicacileyo. Ezi zetekethi zenzelwe ukubonakala, kungekhona ukubala. Ngoko ke, xa ikhompyutha ifunda itekisi kwaye izama ukuyenza, iyayeka, iphazamise, njengokuthi, "Ufuna ukuba ndifunde ntoni na?" Ukuba awuyiqondi isizathu sokuba enze oku, unokufuna ukuphinda ubuyekeze indlela ikhompyutha efunda ngayo inkqubo .
Ingongoma ephambili phakathi komhleli wesicatshulwa kunye nezinye izicelo ezivumela ukuba uhlele umbhalo ukuba umhleli wombhalo akalondolozi ifomathi. Ngoko, kunokwenzeka ukuba ufumane umhleli wombhalo kunye namawaka eempawu, nje ngeprogram yomyalezo. Uphawu olucacileyo kukuba lugcina isicatshulwa njengento elula, umbhalo ocacileyo.
Ezinye iziCwangciso zokukhetha umhleli wombhalo
Kwiprogram yePython, kukho amanqaku ngokwenene abahleli abakukhethayo. Nangona i-Python ihamba nomhleli wayo, I-IDLE, akunakuze uvumeleke ukuyisebenzisa. Wonke umhleli uya kuba nokuhlanganiswa kwayo kunye namancinci. Xa uhlola ukuba yeyiphi na oya kuyisebenzisa, iimbalwa ezimbalwa zibalulekile ukugcina engqondweni:
Inkqubo yokusebenza oyisebenzisayo. Ngaba usebenza kwi-Mac? Linux okanye i Unix? Windows? Umqathango wokuqala omele ugwebe ukufaneleka komhleli nokuba usebenza kwiqonga oyisebenzisayo. Abanye abahleli banokuzimelela kwinqanaba elithile (basebenza kwiinkqubo ezininzi zokusebenza), kodwa abaninzi banqunyanyelwe omnye. Kwi-Mac, umhleli weetekisi ogqithwayo kakhulu yi-BBEdit (yeyiphi i-TextWrangler yinguqulo yamahhala). Zonke ii-Windows zokufakwa ziza kunye ne-Notepad, kodwa ezinye izithuba ezithandekayo zokuqwalasela zi-Notepad2, Notepad ++ kunye ne-TextPad. Kwi Linux / Unix, abaninzi banokukhetha ukusebenzisa iGeget okanye Kate, nangona abanye bekhetha iJOE okanye omnye umhleli.
Ngaba ufuna umhleli we-barebones okanye into enezinto ezininzi? Ngokuqhelekileyo, ngakumbi iimpawu umhleli, kunzima ukufunda. Nangona kunjalo, xa ufunda, ezo zixhobo zihlala zihlawula iindleko ezihle. Abanye abahleli be-barebones bakhankanywe ngasentla. Kwi-side-full side of things, ababini abahleli bee-multi-platform bavame ukuya ekhanda-intloko: vi ne-Emac. Umva wokugqibela uyaziwa ukuba ube nekhasi lokufunda elisondeleyo, kodwa uhlawule ngokugqithisileyo xa umntu efunda (ukuchazwa ngokugcwele: Ndingumsebenzisi okhuselekileyo kwaye ndiyilo, ngokubhala le nqaku nge-Emac).
Naziphi na izakhono zokunxibelelana? Ukongeza kwii-desktop izixhobo, abanye abahleli bangenziwa ukufumana iifayile phezu kwenethiwekhi. Abanye, njengama-Emac, bade banike amandla okuhlela iifayile ezikude ngexesha langempela, ngaphandle kwe-FTP, ngaphezu kokungena ngemvume okukhuselekileyo.
AbaHlomelo beeNdatshana ezikhuthaziweyo
Yiyiphi umhleli oyikhethayo kuxhomekeke ekubeni unamava amaninzi ama-computer, into oyifunayo ukuba uyenze, kwaye yiphi isicwangciso ofuna ukuyenza. Ukuba unobutsha kubahleli bamaphepha, apha ndibonelela ngezinye iziphakamiso malunga nomhleli onokufumana uncedo kakhulu kwii-tutorials kule sayithi:
I-Windows: I- TextPad inikeza amava omsebenzisi ngokuchanekileyo ngeempawu ezimbalwa ukuncedisa. Ezinye iinkampani zeekhompyutha zisebenzisa i-TextPad njengomhleli oqhelekileyo weprogram ezichaziweyo ngeelwimi.
I-Mac: BBEdit ngumhleli othandwayo kuMac. Kuyaziwa ngokunikela i-bevy yeempawu kodwa ngaphandle kokuphuma kwindlela yomsebenzisi.
I-Linux / Unix: I- GEID okanye i-Kate inikezela ngamava amaninzi asebenzisekileyo kwaye afaniswa ne-TextPad.
I-Platform ezizimeleyo: Ngokuqhelekileyo, ukuhanjiswa kwePython kuza nomhleli umhle ngokupheleleyo kwi-IDLE, kwaye ihamba yonke indawo i-Python yenzayo. Abanye abahleli be-note-friendly abathandekayo nguDkt Python no-Eric 3. Ngokuqhelekileyo, umntu akaze akhohlwe malunga ne-vi ne-Emac.
Yakha i-RSS Reader kunye nePython
Ukufaka iiDatha kwiDatabase ye-PostgreSQL
Indlela yokusebenzisa i-Pickle ukugcina izinto kwi-Python
"Molo Lizwe!" ITutorial kwiPython
Elohim Phakathi Nenkolo Ka Raelian
Indlela yokuFaka ipesenti kunye neBakala leBakala
Isivakalisi esisisigxina esisigxina kwiiJapan zesiGwebo (2)
USeth Meyers White House Iintetho zeNtetho zokutya
Ukudibana neentsapho zaseFransi: Iindaba ezilula zeFrench-isiXhosa ezimbini
Iifowuni zabesetyhini zeXesha le-17
Igumbi Lokubulala Umgumbi
IQiniso elinesibhozo iyakhupha kwiZakhiwo
I-Mythology ye-Ah Puch, uThixo wokufa eMkhosini we-Mayan
I-albhamu eziphezulu ze-10 zelizwe
Ibhizinisi lesiNgesi - Ukuthatha umyalezo
Konke malunga namaRdicals ngoLwimi lwaseJapan
Iiholide ezinkulu kwiGap Fill Quiz